Nzira dzekutenga zvivako zvepanyama muB Siem Reap?
mavara emagariro echisikigo, Siem Reap
Kana iwe uchibatanidza peji ino, inogona kunge yakanyanyisa.
Usati watenga mabwe anokosha kana zvishongo muB Siem Reap, zvakakosha kuverenga mashoko ari pasi apa.
Siem Reap ndeimwe yenzvimbo dziri munyika umo kune mazita ematombo anokosha.
Kufanana nenzvimbo dzese dzinotarisa, zvinenge zvose zvinenge zvakakanganisa. Kune mari yakawanda yemari inouya kubva kuvashanyi kwezvinhu zvakashata, vachiziva zvakakwana kuti vatashanyi havazombofi vakadzokera kunonyunyuta, kana vadzokera kunyika yavo.
Gemstone scam inofanirwa makumi emakumi ezviuru zvemadhora masikati munguva yepasi dzevashanyi, uye mazana emakumi emadhora madhora pazuva panguva yakakwirira, kubva munaNovember kusvika munaChitatu.
Iyi ndiyo nzira yakanakisisa yekuba mari kubva kune vatashanyi, pasina chisimba uye nekumwemwerera.
Kana iwe uri mukana, vanhu havazoedzi kukunyengerai, asi vanenge vanhu vose vamunokumbira mazano ndezvemafia aya mafia makuru. Saka usatenda ani zvake: mutungamiri wekushanyirwa, hoteri yekugamuchira, mutyairi webhazi, mutyairi wetekisi ...
Zuva rega rega tinoona vanhu vachiuya kusangano rezvidzidzo, vanoziva kuti vakabvarurwa. Vanouya kuzoedza mazita avo ematombo mu laboratori yedu mushure mokuwana kero yedu paGoogle, asi inenge ichangopfuura. Kubva panguva iyo mutengi achibva muchitoro, zvapera. Iko hakuna kubhadharwa.
Hatikwanisi kuverenga kuti kakawanda sei takaona vakadzi vachichema pavakaona kuti vakanga vashandisa mazana kana zviuru zvemadhora mumatombo ematombo uye zvishongo zvisiri izvo
Zvechokwadi, kune zvizhinji zvezvigadzirwa zvemahombekombe ematombo, izvo zvinogovana zvipo nevose vese, mutambo wekugamuchira hoteli, mutyairi, mutungamiri, nezvimwewo. Vanyengeri vanopa kusvika ku50% yemutengo wekutengesa kune avo vanoita
Zviri nyore kwazvo kutaurira vatashanyi chero chinhu nokuti havana kunzwisisa mutauro wekune imwe nyika, uye vakagadzirirwa nekumwemwerera uye mutsa wehama dzavo itsva.
Kana iwe ukakumbira mutambiri kuti atitane nesu kuti tivere mabhuku, heano mimwe mienzaniso yezvavanokupindura: (izvi ndizvo zvipupuriro zvinobva kune vatengi vedu)
- "Ndakaedza kudana nefoni, asi dare iri rakavharwa"
Muzvokwadi, hazvina kunaka! Takazaruka gore rose. 7 mazuva pavhiki, 9 ndiri ku 10 pm
- "Ichi chitoro chinotengesa mabwe emanyepo, asi ndine shamwari ine shop, ini ndamuziva kwemakore 20, iwe unogona kuvimba naye. "
Muzvokwadi, hazvina kunaka! Isu tinongotengesa zvigadzirwa zvemhando, uye isu tiri chete!
- "Zviri kure nehotera yako, pane zviri nani uye zvishoma kure"
Muzvokwadi, hazvina kunaka! Isu tiri kuDowntown Siem Reap
- "Ichi chitoro hachisisipo, vakavhara, asi ini ndinoziva doro rakanaka, kana muchida, ndichakuendesa ikoko"
Muzvokwadi, hazvina kunaka!
Vanogona kuenda kure kure nekureva nhema. Vanogona kukuchengetedza iwe kumirira kwemazuva, kusvikira iwe wapera uye uchibvumirana kuenda pane imwe soro panguva yekupedzisira, iwe usati waenda. Ikoko iwe unoenda! Iwe pakupedzisira wakabviswa!
Ndosaka zvakakosha kuti uzviite iwe pachako. Nokudaro, iwe uchava 100% yakachengeteka. Tinopa kutakura kwekutakura kubva kuhotera yako. (Round round)
Usanonoka kutaura nesu. Hapana anogona kuzviita zviri nani kupfuura iwe. Tinotaura chirungu, chiFrench, khmer ...
- Danai office: + 855 63 968 298
- Facebook Messenger: Gemological Institute yeCambodia
- Email: [Email akadzivirira] (tinopindura mukati kwenguva pfupi chaizvo)
Kana iwe uchiri kuda kutenga dombo reguyo kubva mune imwe soro nokuti unonyatsoziva kuti ibwe regugu, zvino bvunza chikopa. Kuziva kuti chigwaro chaicho chinofanirwa kuitwa nemunhu anodzidza gemologist, mune rimwe gorosi re laboratory. Chero chipi nechipi chinyorwa ndicho chakaipa
Kana dare reku Siem Reap richikuudza kuti tine ushamwari pamwe chete, hazvina kunaka. Hatina vashandi. Izvi hazvirevi kuti iyi dare ine zvivigiso chimwe kana zviviri zvakabudiswa ne laboratory yedu iyo inoreva kuti zviuru zvezvimwe zvivigiro zvinotengeswa mudura ndezvechokwadi. Izvo chaizvoizvo kutongesa mamwe magweti avakaratidzira iwe zvituti zvedu. Kana mamwe mimwe mabwe akave echokwadi, ivo vangadai vakave vakavimbiswa mumwe chete.
Icho hapana chinyorwa chakatsanangurwa chebasa reGemstone kuDaily mu "Shopping" muchikwata ku Siem Reap kunze kwedu. Zvibvunze mubvunzo: nei? Kuti uwane mhinduro, zvose zvaunofanirwa kuita ndeyekuti mabhizimisi ose ematombo akabvunzwa TripAdvisor kuti abvise peji yavo nekuti vakangogamuchira zvichemo pamusoro pekubiridzira.
Ziva kuti hatisi kuedza kukuvadza vatengesi vematombo. Havasi vose zvavo vasina kutendeseka, vamwe vakatendeseka kufunga nezvekutengesa mabwe emabwe chaiwo, vasingazivi kuti mazita aya anove fakes kana kuti anobatwa. Asi mumagumo, mhedzisiro yacho yakafanana kune mutengi
Kurwiswa kweKawaia kweHawaii haina kunaya mabwe anokosha kubva kudenga
chitsva chokuunganidza gemwe itsva
Zuva rekati kornerupine